पैसा कमाउने केही शुत्रः दिउँसो सपना देख्नुस् , धनी बन्न राती होइन ! – Ramailo Sandesh
पैसा कमाउने केही शुत्रः दिउँसो सपना देख्नुस् , धनी बन्न राती होइन !
पैसा भन्ने वित्तिकै महादेवको पनि तीन नेत्र हुन्छ भनिन्छ । पैसाको आवश्यकता कसलाई छैन । सबैलाई हुन्छ । किनकी बदलिदो परिवेश फेरिदो समाजमा उपभोग गर्ने बानी धेरैको छ ।आफ्नो चाहानाको बस्तु उपभोग गर्न पैसाकै जरुरत पर्छ । सामान्य जीवन यापन गर्नदेखि ठूलो विजनेस स्टार्ट गर्न पैसा नभइ नहुने कुरा हो ।पैसा कमाउन सकेन भने उसलाई असफलको संज्ञा पाइन सक्छ । यो एक माध्याम मात्र हो तर, नभइ हुँदैन ।धेरै युवाहरुको सपना धेरै हुन्छन् । त्यसैले हरेकले पैसा कमाउने जुक्ति खोजिरहका हुन्छन् । यहाँ हामीले केही तथ्य उल्लेख गरेका छौं । जुन तपाईले फलो गर्नु भयो भने पैसा कमाउन सहज हुनेछ ।
यहाँ पैसा कमाउन दुई नम्बरी धन्धा नगरी सजिलै पैसा कमाउन सकिन्छ र ? भन्नेहरु पनि छन् । कमाइरहेका पनि होलान् तर, एक दिन राज्यको निगरानीमा पर्छन् नै तिनीहरु । वा त्यसरी कमाएको पैसाले आफूलाई सन्तुष्टि दिन सक्दैन ।बहुलठी बनेर अर्काको देखासिकी गरेर पैसा खर्च नगर्नुस् । बचत गर्ने बानी बसाल्नुस् । पैसा उडाउने खालका साथी छन् भने तिनीहरूको संगत छोडिदिनुस्। आफ्नो लक्ष्यमा अर्जुन दृष्टि राख्नुस् ।